Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air Canada waxay ku daraysaa awood dheeraad ah Vancouver
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Air Canada waxa ay ku daraysaa 586 tan oo awood xamuul ah, oo ka dhigan 3,223 mitir kuyuubik ah si ay u taageerto silsiladda saadka dhaqaalaha ee BC iyo baahiyaha bulshooyinkeeda.
Air Canada ayaa maanta ku dhawaaqday inay si weyn u kordhisay awoodda xamuulka ee gudaha iyo dibadda ee Vancouver intii u dhaxaysay Noofambar 21 iyo 30 ee xarumaha ay ku leedahay Toronto, Montreal iyo Calgary iyada oo ka shaqaynaysa hubinta in isku xidhka silsiladaha dhaqaale ee muhiimka ah British Columbia waa la joogteeyaa ka dib raadka daadadkii todobaadkii hore. Wadar ahaan, Air Canada waxay ku daraysaa 586 tan oo awood xamuul ah, taasoo ka dhigan 3,223 mitir kuyuubik ah si ay u taageerto silsiladda sahayda dhaqaalaha BC iyo baahiyaha bulshooyinkeeda. Awoodda dheeraadka ah waxay u dhigantaa miisaan ilaa 860 moose qaangaar ah.
"Silsilad sahayda dhaqaale waa muhiim, iyo in laga caawiyo taageerida gaadiidka degdega ah ee alaabada soo gelaya iyo ka bixista British ColumbiaWaxaan kordhinay awooda xaruntayada YVR anagoo adeegsanayna dabacsanaanta Air CanadaKooxda diyaaradaha si ay dib ugu badelaan 28 duullimaadyo rakaab ah oo ka imanaya diyaaradaha jirkoodu cidhiidhi yahay si ay ugu shaqeeyaan Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777, iyo Airbus A330-300. Isbeddelladani waxay u oggolaanayaan 282 tan oo badeecooyin dheeraad ah in loo raro waddanka oo dhan duullimaadyadayada rakaabka ee jadwalkayaga ah,” ayuu yiri Jason Berry, Madaxweyne Ku-Xigeenka, Cargo, ee Air Canada.
"Intaa waxaa dheer, Air Canada Cargo waxay ku shaqeyn doontaa 13 duullimaad oo dheeraad ah oo xamuulka qaada ah inta u dhaxaysa Toronto, Montreal iyo Calgary xarumaha xamuulka iyo YVR iyadoo la isticmaalayo diyaarad ballaaran, oo bixisa ku dhawaad ​​304 tan oo awood dheeri ah. Diyaaradahani waxa ay gacan ka gaysan doonaan dhaq-dhaqaaqa waraaqaha iyo waxyaabaha halaagga ah sida cuntooyinka badda, iyo sidoo kale qaybaha baabuurta iyo agabka kale ee warshadaha,” ayuu hadalkiisa ku soo xidhay Mr. Berry.
Hawada Kanada waxa kale oo ay la shaqaynaysaa shuraakada gobolka ee Jazz Aviation si ay u bixiso awood shixnad goboleed oo dheeri ah iyada oo si ku meel gaadh ah u bedeli doonta Air Canada Express De Havilland Dash 8-400 qaabaynteeda caadiga ah ee rakaabka una badasha qaabaynta xamuulka gaarka ah. Xamuulkan Dash 8-400 la Fududeeyay ee uu ku shaqeeyo Jazz waxa uu qaadi karaa wadar dhan 18,000 rodol. (8,165 kg) oo xamuul ah waxaana loo diri doonaa in lagu qaado badeecadaha muhiimka ah, iyo sidoo kale macaamiisha iyo alaabada warshadaha waxaana la adeegsan doonaa horaanta usbuucan.
Todobaadki hore, markii ay soo shaacbaxday saameynta fatahaadaha khasaaraha geystay. Air Canada si degdeg ah ayaa loogu daray awoodda shabakadda xamuulka ee Air Canada iyadoo lagu beddelayo dayuuradaha waaweyn ee 14 duullimaadyada rakaabka ee Vancouver.
Marka lagu daro awoodda xamuulka dheeriga ah, Air Canada ayaa sidoo kale kordhisay tirada kuraasta ay heli karaan macaamiisha Kelowna iyo Kamloops tan iyo Noofembar 17, iyada oo ku daray ku dhawaad ​​1,500 kursi labada bulsho iyada oo adeegsanaysa diyaarado waaweyn wadooyinka. Tani waxay u sahashay dadka ay saamaysay xirnaanshaha wadooyinka in ay ka duulaan kana dhoofaan garoommadaas, iyadoo loo sii marayo awooda xamuulka ee diyaaradahan rakaabka ah, waxa ay sidoo kale ogolaatay in sahay caafimaad oo deg deg ah loo qaado goboladan.
Air Canada waxay sii wadaa inay si dhow ula socoto xaalada British Columbia waxayna u habeyn doontaa jadwalka rakaabka iyo xamuulka si waafaqsan.